कारोना परीक्षण गर्न स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त मात्रामा छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय – Upahar Khabar
प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०७७, बुधबार १९:०८ May 13, 2020
काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त मात्रामा भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमति पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाकाले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायर बढाइएको र परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य सामग्री पयाप्त मात्रामा रहेको जानकारी दिए ।
नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित २१९ जना पुगेका छन् । तीमध्ये पुरुष १७६ महिला ४३ जना रहेका छन् । आज बुटवलबाट २५ वर्षीय पुरुष र चितवनका ६३ वर्षको महिला घर फर्किएपछि ठीक भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या ३५ जना रहेको छ । हालसम्म रेडजोनमा ३४२ रहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी र पत्रकारमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा पिसिआर दुई हजार ३५७ र आरडिटी ६९२ को परीक्षण सम्पन्न गरेको छ । हाल १२ हजार ७०१ क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । आइसोलेसनमा २४५ छन् भने ३५४ जना रेड जोनमा छन् । कोरोनाको सम्भावित जोखिममा १५८ छन् । आजै बाँकेमा ३६ वर्षे पुरुष र कपिलवस्तुका २२ वर्षीय पुरुष पुरुषमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको प्रवक्ता डा. देवकोटाकाले जानकारी दिए ।
कालापानी क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका लागि छाङरुमा स्थापना गरिएको बीओपी (फोटो फिचर)